ခရစ်ယာန်သာသနာ | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ပြောင်းလဲခြင်း သုံးမျိုး December 10, 2009
ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် စစ်ဖြစ်လျှင် ဘယ်ဖက်ကနေ နေမှာလဲ?
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 11:36 am
ကျွန်တော့၏ ငယ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်လည်းဖြစ်၊ တရုတ်လူမျိုးလည်းဖြစ်သူက မေးသော မေးခွန်းလေးတစ်ခုအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်လို့ အမေရိကန်နှင့် တရုတ်စစ်ဖြစ်လျှင် သူက ခရစ်ယာန် ဖြစ်သည့်အတွက် ဘယ်နိုင်ငံဘက်ကနေ စစ်တိုက်ရမှာလဲ? ဟုမေးပါသည်။ “နိုင်ငံရေးစစ်ဆိုရင်တော့ တရုတ်ဘက်ကနေ တိုက်ပေါ့၊ ဘာသာရေး စစ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန်ဘက်ကနေ တိုက်ပေါ့ ဒ‘ါပေမယ့် ယေရှုကို ယုံကြည်သူဆိုရင်တော့ ရန်သူကိုပင်ချစ်ဖို့ ယေရှုက ပညတ်ထားလို့ ဘယ်ဘက်ကမှ မတိုက်နဲ့ပေါ့” ဟူ၍ ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါသည်။ အရာရာ၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အခြေခံပြီး လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ကြဖို့နှင့် လူတိုင်းနှင့် အသင့်အတင့်နေတတ်ကြဖို့ ယေရှုဘုရားက သွန်သင်ထားပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ဘုရားသည် သူ၏လူများဖြင့်စစ်တိုက်စေခြင်းမှာ ထိုသူတို့ သည် ညစ်ညူးစွာကျင့်ကြခြင်း၊ ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ပြီး သားသမီးတို့အား ယဇ်ပူဇော်ကြခြင်း၊ ဆုံးမသတိပေး၍လည်း မရသည့်အဆုံး ဘုရား၏ လူများကို စေလွှတ်လျက် စစ်ဖြင့် စီရင်စေခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 11:16 am
ယေရှုကိုယုံကြည်သူသည် ထာဝရအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံရပြီဆိုလျှင် ဘုရားကိုအဘယ့်ကြောင့် နေ့စဉ်အပြစ်ဝန်ချ တောင်းပန် နေရပါသေး သနည်း?
ဘုရားကို နေ့စဉ်အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ငရဲသို့မကျဖို့ တောင်းပန်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘဲ သားသမီးက မိဘကို တောင်းပန်သည့်သဘောမျိုးဖြင့် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသားသမီးတို့သည် အပြစ်ကိုမပြုမိရန် အရေးကြီး ပါသည်။ အပြစ်ပြုမိပါက ဘုရား၏ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ပြစ်ဒဏ် ပေးခြင်း ခံရခြင်းသည်ပင် မင်္ဂလာဟု ခံယူနိုင်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ အပြစ်ပြုပါလျက် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမခံရသောသားသည် မင်းဦးမင်းလွင်ရသောသားဟု ကျမ်းစာက ဆိုထားပါသည်။ မင်းဦးမင်းလွင်သားတည်းဟူသော သားစစ်မဟုတ်သူ သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့မရောက်ပါ။ အပြစ်ပြုမိပါက ဘုရား၏ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း မှလွတ်မြောက်ရန် မိမိအပြစ်ကို ဘုရားရှေ့တွင် ချက်ခြင်း ဖေါ်ပြ၊ ဝန်ချ၊ နောင်တရလျက် စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါသခင်ဘုရား၏ သနားခြင်းဂရုဏာဖြင့် အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မည်။
Tags: ရှင်စေ လင်းစေ
ယဇ်ပူဇော်တာ ဘုရားက အသွေးနဲ့ အသက်ကိုကြိုက်လို့လား၊ ထိုရက်စက် သောဘုရားကိုကိုးကွယ်ထိုက် ပါရဲ့လား? ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီး တိရိစ္ဆာန်နှင့်မတူသည့်အတွက် ထိုအပင်၏အသီးကို မစားရဟူသော ပညတ်တစ်ခုကို စောင့်ထိန်းဖို့ ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုပညတ်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့ သူက လူသားဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားမဟုတ်ပါ။ စားသောနေ့တွင် သေရမည်ဟုလည်း လူကိုဘဲပညတ်ခဲ့ပါသည်။ သေရမည်ဆိုသည့် ခပ်သိမ်းသော ခန္ဓာတို့၏အသက်သည် အသွေး၌ တည်ပါသည်။(ဝတ် ၁၈) သင်သည်ယခုအသက်ရှင်ကျန်းမာနေပေမယ့် သင့်သွေးများကို ဖောက်ထုတ် လိုက်ပါက မည်သည့်ရောဂါမျှ မရှိပေမယ့် သေသွားပါလိမ့်မည်။ အပြစ်ကို ဆေးကြောပေးသောအရာမှာလည်း အသွေးအားဖြင့်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အပြစ်တရား၏အခ သေခြင်းဖြစ်လို့ ထိုသေခြင်းတည်းဟူသောအပြစ်ကို အသက် တည်ရာ အသွေး အားဖြင့်သာ ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။ လူသည်မိမိကိုယ်ကို မကယ်တင် နိုင်သကဲ့သို့ သူတစ်ပါးအတွက်လည်း အသွေးဖြင့် အသက်ပေးလျက် ကယ်တင်နိုင် ခြင်းငှါ မတတ်စွမ်းနိုင်ကြပါ။ လူတိုင်း အပြစ်သားများသာ ဖြစ်ကြသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အချုပ်သားအချင်းချင်း အာမခံပေးလို့မရပါ၊ အချုပ်ခန်းပြင်ပမှ ဥပဒေနှင့် လွတ်ကင်းသည့် အပြစ်မရှိ သူမှသာလျှင် အာမခံပေးလို့ ရပါသည်။ ထိုနည်း၎င်း လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ ဤအပြစ်သားတို့၏ လောက ကမ္ဘာပြင်ပမှ အပြစ်ကင်းစင်သူယေရှုက လူ့ဇာတိခံယူ ခဲ့ပြီး လူသား အားလုံး အပြစ်ရဲ့ ကိုယ်စား အသွေးသွန်းလျက် အသေခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ နားလည်နိုင် သောစကားလုံးနှင့် သုံးနှုန်းရပါက ယတြာချေပေးခဲ့သည် ဟုလည်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ယခုအခါ ယဇ်ပရောဟိတ်မှာ ယေရှုကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပြီး ယဇ်ကောင်မှာ လည်း ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင်ပဲဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူတို့အတွက် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကာလမှာ ထာဝရဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုဘုရား လောကသို့ကြွဆင်းမလာမီ ပညတ်တို့ကိုကျင့်စောင့်ရပြီး ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုလည်း ပြုရပါသည်။ အပြစ် အနာအဆာကင်းသော တိရိစ္ဆာန်အပေါ် မိမိလက်ကိုတင်ပြီး အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ယဇ်ပရောဟိတ် ရှေ့မှောက်တွင် ဖေါ်ပြဝန်ချကာ မိမိအပြစ်ကိုယ်စား ထိုတိရိစ္ဆာန်က အသွေးသွန်း အသေခံပေးရပါသည်။ ထိုအချိန် အခါယဇ်ပရောဟိတ်မှာလူဖြစ်ပြီး ယဇ်ကောင်မှာ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ် ပါသည်။ အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်း ကာလမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ပညတ်တော်တို့ကို ကျူးလွန်မိသည့်အခါ အခါတိုင်းလည်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်ရ ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် ဥပုသ်နေ့သည်စနေနေ့ဖြစ်ပါလျက် တနင်္ဂနွေ နေ့ကိုဘာ့ကြောင့် ဥပုသ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ကိုးကွယ် ကြရ ပါသလဲ?
က) တနင်္ဂနွေနေ့သည် ယေရှုဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဥပုသ်နေ့ကလူကို ကယ်တင်ပါသလား၊ ယေရှုဘုရား၏ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းက လူကိုကယ်တင်ပါသလား၊ ဘယ်နေ့က ပိုအရေးကြီး ပါသလဲ? ထို့ကြောင့် ယေရှုဘုရား ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်သည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ခ) ဥပုသ်နေ့ကိုအောက်မေ့လျက် ထိုနေ့ရက်တွင် ဘုရားကိုအထူးသန့်ရှင်းစွာ ကိုးကွယ်ဖို့ ပညတ်ထားပါသည်။ ထိုပညတ်ကိုလိုက်နာသည့်အနေဖြင့်၎င်း ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်း အောက်မှ လွတ်မြောက် ပြီ ဟူသော သင်္ကေတအမှတ်တစ်ခု အနေဖြင့်၎င်း၊ စနေနေ့အစား တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကိုးကွယ်ကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ (ယော ၁၄း၁၅)
ဂ) ငါ့ကိုချစ်သောသူသည် ငါ၏ပညတ်တို့ကို ကျင့်စောင့်၏ဟု ယေရှု၏ အမိန့်တော်အတိုင်း ပညတ်တရားအောက်မှ လွတ်မြောက်ကြသောကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုကိုချစ်သည့်အတွက် ပညတ်တရားနဲ့ အသက်ရှင်ကြခြင်း၊ ယေရှုကိုချစ်၍ ပညတ်တော် တို့ကို ကျင့်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညတ်တရားအောက်မှ လွတ်မြောက်လျက် ကျေးဇူးတရားအောက်တွင် အသက်ရှင်သည့် သဘောဖြင့် တနင်္ဂနွေနေ့ကို ဥပုသ်နေ့အဖြင့် သတ်မှတ်ကိုးကွယ်ကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ (ဂလာတိ ၃း၁၃)
ထိုနေ့ရက်ကို အထူးသတ်မှတ်ကိုးကွယ်ကြပေမယ့် နေ့ရက်အချိန်တိုင်း အထူးကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံထိုက်သော ဘုရား ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်ထဲတွင်သာ ကိုးကွယ်ကြဖို့ရန် ဘုရားမှအလိုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တနင်္ဂနွေနှင့် စနေနေ့ အတွက်သာ ခရစ်ယာန်များ မဟုတ်ဘဲ နေ့ရက်တိုင်း ဘုရားကို ကြည်ညိုနှိမ့်ချလျက် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်ကြရပါမည်။
ဘာံကြောင့် မူကွဲပုံစံမျိုးဖြင့် ကြွဆင်းလာမည်နည်း?